theZOMI: Burma News International - April 2, 2013
Burma News International - April 2, 2013
Four private daily newspapers were published on Monday in Myanmar—the Voice Daily, Golden Fresh Land, the Union Daily, and San Daw Chein—for the first time since the 1960s.
Naypyitaw to Wa: Statehood up to Parliament
Meeting the United Wa State Army (UWSA) representative Xiao Samkun on 20 March, on the sidelines of Shan-Kayah Trustbuilding for Peace forum, Naypyitaw’s chief negotiator U Aung Min was reported to have informed him that whether or not the Wa should have its own state must be decided by the Union Assembly, according to sources.
Cheap SIM cards coming soon, says Thein Sein
President Thein Sein has announced that low-price mobile SIM cards will be available in Myanmar soon. The announcement was made inaradio speech outlining the country's new budget on March 31.
Thirteen boys died in Botahtaung Islamic School in central Yangon whenafire broke out in the early hours of Tuesday at the adjoining Yay-Gyaw Mosque.
မိတ္ထီလာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသများတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများသည် တိုင်းပြည်အဘို့ စမ်းသပ်ချိန်ကာလတခုကို ဖြတ်သန်းနေရချိန်ဖြစ်ကြောင်း နောက်တကြိမ် ထပ်မံ ပြသလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မူစယ် ရွှေဆိုင်ဓါးပြတိုက်မှု ရွှေတစ်ပိဿာကျော်ခန့် ဆုံးရှုံး
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်ခရိုင် စည်ပင်သာယာဈေး ရွှေရောင်းတိုက်တန်း တွင် မနေ့က ၁၂ နာရီခွဲအချိန် ဓါးပြတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ရွှေ ၁ ပိဿာခန့်ကျော် ပါသွားကြောင်း ရွှေ အရောင်းဆိုင်များ ထံမှ သိရသည်။
ကရင်နီ မီးဘေးဒုက္ခသည်များ အတွက် ပြန်လည်ထောင်ထူရေး စတင်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်ရှိ ကရင်နီ အမှတ်(၂)ဒုက္ခသည်စခန်းမှ မီးဘေး ဒုက္ခသည် နှစ်ထောင် ကျော်အတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဖြစ်သည်ဟု ကရင်နီဒုက္ခသည် ကော်မတီ-KnRC က ပြောသည်။
ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတွင် တအာင်းတပ်နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့နှင့် တအာင်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF)မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မိုင်ဘုန်းကျော်က ပြောသည်။
ရန်ကုန် ဗလီ မီးလောင်မှု လွတ်လပ်စွာစုံစမ်းရေး အာဆီယံ အမတ်များ တောင်းဆို
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ အစ္စလာမ် ဗလီဝတ်ကျောင်း မီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရပ် ပြုလုပ်ရန် မြန်မာ့အရေး အာဆီယံ လွှတ်တော် အမတ်များအဖွဲ့ (AIPMC) က အင်္ဂါနေ့တွင်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အစိုးရတပ်၏နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစီမံကိန်းကြောင့် ချိန်းဆိုထားသည့်အတိုင်းမတွေ့ဆုံနိုင်ဟု KIO ပြော
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းတို့ ဧပြီလ ၁၀ ရက်မတိုင်မီ ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် သဘော တူထားသော်လည်း လက်ရှိတိုက်ပွဲ များကြောင့် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဟု KIO ကပြောသည်။